ပြောင်းလဲခြင်းသည် Tools များ: Porn စွဲကနေ Recovery ကို - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ပြောင်းလဲမှုအတွက်ပြောင်းလဲမှု၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမဟောင်းတိုက်ခိုက်နေအပေါ်ပေမယ့်သစ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အားလုံးအာရုံစိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "- ဆိုကရေးတီး
များစွာသောသူတို့အတွက်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုစွန့်ခွာခြင်းသည်သူတို့၏ဘဝကဏ္aspectsများကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ Willpower နှင့်“ white knuckling” တို့သည်ဤစွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ YBOP တွင်“ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပရိုဂရမ်” ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိပါ၊ ဤအခန်းတွင်ပြောင်းလဲရန်အတွက်ကိရိယာများကိုအောင်မြင်စွာ reboot လုပ်သောသူများ၏အကြံပေးချက်များနှင့်ကိရိယာများပါရှိသည်။ အကောင်းဆုံး“ rebooting advice” ပို့စ်များကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် - အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့်
စာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးမှာလင့်ခ်များစွာကိုခွဲလင့်များဆံ့။ ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် အထောက်အပံ့ tab ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များရှိမက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ကုသသည်။ နှင့်:
အခြားသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါမှ Tools များ
၁) ညစ်ညမ်းမှုကသင့် ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားပါ။ ဘာကြောင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လွင့်နေစေကာသင်၏ဆုလာဘ်ပတ်လမ်းကိုပုံမှန်အထိခိုက်မခံနိုင်အောင်ပြန်ထားဖို့လိုတယ်။
သင်သည်သင်၏ဦးနှောက်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဘာစွဲလာတယ်, အနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်စဉ်များကိုမည်သို့, သင်ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့သင့်ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းခုတ်မောင်းဖို့ပိုကောင်းပြင်ဆင်ထားများမှာမည်သို့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဥာဏ်နှင့်တကွ.
သင့်မှာမရှိသေးဘူးဆိုရင် ကျေးဇူးပြု၍ စောင့်ကြည့်ပါ သင့်ရဲ့ Porn အပေါ်ဦးနှောက်: Porn စွဲနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn တွေ့ဆုံ.
သငျသညျ porn-သွေးဆောင် ED, လက်ပတ်နာရီရှိပါက porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်ဤမကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစူးစမ်း - ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောငါ၏အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လား?
ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အတိတ်ကလိင်နှင့်ခြားနားမှုနှင့်မည်သို့ကွာခြားကြောင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်ရန်အောက်ပါဆောင်းပါးများကိုအစီအစဉ်အတိုင်းလိုက်ဖတ်ပါ။ porn, အသစ်အဆန်းများ, နှင့် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု, porn ထိုအခါနှင့်အခုဆိုရင်: ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် နှင့် အဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ?
2) ကို restart နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကပါဝငျနားလည်ပါ။
ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိရိယာများကိုစတင်ပါ အခြေခံဆောင်းပါးပြန်ဖွင့်။ ပြန်ဖွင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူအခြားသူတွေရဲ့ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမြောက်မြားစွာကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ် ဒီနေရာမှာအကောင့်ကို restart, ED ပုံပြင်များအများစုအပါအဝင်.
လုပျလုပျမဟုတျဘဲအဘယ်သို့များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်: အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာဆယ်ယူခဲ့ကြသောသူတို့သည်သီးနှံအကွံဉာဏျရေးသားချက်များ၏မုန့်ပါရှိသည်။
ပြန်ဖွင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ fetishes အပါအဝင် porn စွဲနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာများမှပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အချိန်ထွက်ယူဘို့ငါတို့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုစွဲလမ်းနေပါကသင်၏ ဦး နှောက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအားလုံးအတွက်အတူတူအခြေခံကျသောဇီဝကမ္မနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ desensitization, sensitization, ဟန်ဆောင်မှု နှင့် ပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုစနစ်. porn စွဲ porn-သွေးဆောင် ED, DE, လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်တစ်ဦးခြင်းဖြင့်သက်သေအဖြစ်, ဦးနှောက်၏ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများနှင့်ဆားကစ်ကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ flatline ဆုတ်ခွာစဉ်က။
reboot လုပ်ရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သော porn, porn fantasy and masturbation မှအနားယူရန်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားအချို့သည် reboot လုပ်သည့်အချိန်တွင် orgasm များကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ လူတိုင်းဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခက်ခဲတဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမရှိဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်သည်လိင်စိတ်ကိုထိတွေ့ခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ကူးမကြည့်ပါကအကျိုးရှိနိုင်သည်။
သင်၏ ဦး နှောက်ကိုမျှတစွာထားခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောအကျင့်များနှင့်အရာဝတ္ထုများ၏ဆွဲဆောင်ခြင်းကိုသင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုရန်မှာ porn-induced ED ရှိသူများသည် Internet porn သည်ဖြစ်သည် အဆိုပါစွဲ နှင့် အကြောင်းရင်း ပညာရေး၏, မဟုတ် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းသို့မဟုတ် orgasm ။ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုယာယီဖယ်ရှားခြင်းသည်၎င်းအားရုပ်သိမ်းခြင်းကိုစတင်သည်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမှအော့ဖ်ဝါမပါသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ စွဲလမ်းမှုကိုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်သွားရန်နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည် - အလုပ်များ.
ပြန်ဖွင့်နှစ်ခုအတော်လေးကွဲပြားဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏ပယ်ဖျက်ခံရပါဝင်ဟန်: desensitization နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် (ထိခိုက်လွယ်) ။ သငျသညျ reboot အဖြစ်သင့်ဦးနှောက်ကိုသင်ခွင့်ပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ကြိုတင် sensitivity ကိုမှပြန်လာပါလိမ့်မယ် ခံစား ပိုပြီးပုံမှန် arousal နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု။
စွဲအာရုံခံစားမှု၏အားကောင်းစေပါတယ် "လုပ်သာလုပ်" အာရုံကြောလမ်းကြောင်းများနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရား၏အားနည်း "ဒီအကြောင်းစဉ်းစားကြစို့" အာရုံကြောလမ်းကြောင်း။ အဆိုပါတဏှာလမ်းကြောင်းအကြားစစ်ပွဲတစ်ခု tug ရှိပါတယ် (ာင်း) သင့်ရဲ့တိုကျရိုကျ cortex နေထိုင်ရသောနှင့်သင့်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု။ အားနည်းတိုကျရိုကျ cortex လမ်းကြောင်း (hypofrontality) အသုံးချမှုကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်တပ်မက်ခြင်းများကြောင့်စစ်ပွဲများကိုအနိုင်ယူသွားသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်အချိန်ယူရသည်။ ကြည့်ရှုပါ - ဝါယာကြိုးနှင့် Rewiring ။
အရက်သမားတစ် ဦး သည်သူ / သူမ၏အားလပ်ချိန်များကိုအရက်ဆိုင်များတွင်သွားသုံးခြင်းသည်ကောင်းသည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ သင်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲထားခြင်းကြောင့်သင်သည်သက်သက်စွမ်းအားထက်ပိုပြီးအသုံးချလိုပေမည်။ သင်၏ကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးရုပ်ပုံများ) ကိုခဏလေးပိတ်ထားပါကပြန်လည်ဖွင့်ရန် ပို၍ လွယ်ကူနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဆိုပါက၎င်း၏တည်ရှိမှုသည်အတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အတူ Start သင့်ရဲ့ Computer ကိုနှင့်ဖုန်းကိုထိန်းကျောင်းနေခြင်း, အောင်မြင်သော rebooters ကအသုံးပြုအများအပြားနည်းလမ်းများခြုံငုံသုံးသပ်။
Web ကိုစိစစ်မှုများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းများလမ်းညွှန်။ အောင်မြင်သောပြန်လည်ထူထောင်သူအားလုံးနီးပါးဒီ tool (နောက်ဆုံးမှာ) ကိုအသုံးပြုသည်။
သင့်ရဲ့ Computer ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုပါနဲ့အခြားအကြံပေးချက်များ - အမျိုးသားများသည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များပေးသည်။
သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာပြောင်းနည်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုရန်အီးမေးလ်များကိုတားဆီးပါ။
ရယူ ဆရာဝန်-အကြံပြု apps များ ဦးနှောက် reprogramming မြန်ဆန်ဖို့သင့်ကွန်ပျူတာ၏။ (apps များမှ Links များဆောင်းပါးထဲမှာ embedded ကြသည်)
သင်လုပ်ကိုင်ရန်ဆွဲဆောင်ခံရသည်ဟုသင်ခံစားရသောပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိရိယာများကိုသင်ရွေးချယ်သောအခါလူသားများသည်မျိုးနွယ်စု၊ စုံတွဲနှင့်ဆက်နွယ်သောမျောက်များဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အခြားသူများနှင့်အပြန်အလှန်မဆက်ဆံသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်စိတ်အခြေအနေကိုကောင်းစွာထိန်းညှိရန်မဖွံ့ဖြိုးသေးပါ။ ဆိုလိုတာကသင်အထီးကျန်ဖြစ်တဲ့အခါစိုးရိမ်စိတ်ဟာပုံမှန်ပါပဲ။ ငါသည်ဤ post ကို၏အိမ်ရှင်အားဖြင့်ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် YourBrainRebalanced.com - ပြန်ဖွင့်တွင်ငါ၏အကြံအစည်.
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ လေးလံသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့မတွေ့ရှိပါ ခံစား socializing နဲ့တူ။ သူတို့သည်လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်သောအလွန်အတွေးတွင်ပင်အလွန်စိတ်ပူပန်ခဲ့ကြပေမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သူတို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး, သူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့တွန်းအားပေးရန်ရှိသည်ရင်တောင်အခြားသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေခြင်းမှအကျိုး။ သင်ရှက်နေလျှင်အောက်ရှိအကြံပေးချက်များကိုအထူးဂရုပြုပါ အခြားသူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါမှ Tools များ။ ပြီးတာနဲ့ porn ၏ချွတ်, သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်မကြာမီသူတို့အပေါ်ရှင်သန်ပြောင်းလဲသောသုဒ္ဓကသဘာဝဆုလာဘ်အချို့ကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်: နီးစပ်, ယုံကြည်စိတ်ချရအဖော်များနှင့်ပုံမှန်, ချစ်ခင်ထိတွေ့ soothing ။ လူမှုတိုးတက်မှုများအကြောင်းအသုံးပြုသူများ၏မှတ်ချက်များကိုဖတ်ပါ.
သင် dopamine (porn) အရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားသောအခါ၎င်းကိုအခြားကျန်းမာသော dopamine ရင်းမြစ်များဖြင့်အစားထိုးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အပြောင်းအလဲအတွက်မည်သည့်အပိုကိရိယာများကိုသင်စဉ်းစားသည်နှင့်အမျှအကြီးစားညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုမျှတမှုရှိစေရန်သဘာဝကျကျအထောက်အကူပြုသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အမှန်အစားထိုးပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း၊ သဘာဝရှိအချိန်၊ ဖန်တီးမှုလှုပ်ရှားမှုများ၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ ကျန်းမာသောအစားအစာနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သောသဘာဝကျသည့်အကျိုးကျေးဇူးအချို့သည်အခြားသူများကလူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ကိရိယာများကိုအုပ်စုနှစ်စုခွဲထားသည်။
“ ငါအလေ့အကျင့်တစ်ခုကိုရပ်တန့်ချင်တဲ့အချိန်မှာသတိထားမိလိုက်တာကခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အလေ့အထကိုအခြားတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးလိုက်တာကပိုလွယ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ပြrootနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုရှာပြီးအခြေခံအရင်းအမြစ်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလေ့အထတစ်ခုအားအခြားတစ်ခုနှင့်လုံးဝဖယ်ရှားပစ်ပါ။ “ ငါတစ်ခုခုမလိုချင်ဘူး” နဲ့“ ငါတစ်ခုခုလိုချင်တယ်” ထက်“ ငါတစ်ခုခုမလိုချင်ဘူး” ဆိုတာနဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ semantic ပါ။ အလွန်နက်ရှိုင်းပြီးအရေးကြီးလှသည်။
ကို restart အပြင်, လူတွေတခါတရံအထူးသဖြင့်ခေါင်းမာဟောင်းပုံစံများမှတဆင့်လုပ်ကိုင်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုအပ်ပါတယ်။ persistent ဒေါသ, အရှက်ကွဲခြင်း, ဝမ်းနည်းခြင်း, စွန့်ခွာ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကျရောဂါအကြံပေးခြင်းအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အချက်ပြနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးကုထုံးထံမှအကူအညီကိုရှာလျှင်သင်ဖို့လိုပေမည် သူ့ကိုပညာပေး / သူမ၏ပထမဦးဆုံး မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများကိုသတင်းပို့နေသောလက္ခဏာများအချို့အကြောင်းကို။
အလက်အောက်တွင် အစဥ္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတတ္မႈအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ရန္။ အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာများ၊ ဖိုရမ်များနှင့်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့များကိုတွေ့နိုင်သည်။ အထောက်အကူပြုအဖွဲ့သည်ရင်းနှီးသော၊
ပြန်လည်ထူထောင်အသုံးပြုသူများသည်အခြားသူများနှင့်အကြံပေးချက်များနှင့်ထောက်ခံမှုဖလှယ်ပုံမှန်ဘလော့ဂ်ကနေအလွန်တရာအကျိုးကျေးဇူးရရှိမှာပါ။ အဆိုပါဆိုဒ်များအတော်များများဖိုရမ်များ, အစည်းအဝေးများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်များရှိသည်။ အများဆုံးတက်ကြွစွာဖိုရမ်များ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
ကျွန်တော်တို့၏ မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်း သဘာဝကျကျထအကြံပေးချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များပါဝင်သည်သောမေးခွန်းများကိုအများစုဖွကွေား။
အကြမ်းဖျဉ်းဖတ် အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် အကြံပေးချက်များ, အကွံဉာဏျ, ထိုအရပ်ဖြစ်ရပြီသူတို့ထံမှလှုံ့ဆျောမှု၏စာမကျြနှာအဘို့။
www.addictedtointernetporn.com ကိုဖွင့်တဲ့စာရေးဆရာ Noah Church ရဲ့ဗွီဒီယိုတပုဒ်ပါ။
“ အိုကေ၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်မှာစလုပ်မှာလဲ”
Porn စွဲ Recovery ကိုရန် 13 ခြေလှမ်းများ
YourBrainOnPorn အပေါ်သင့်လျော်သောဆောင်းပါးများကို Browse
အားလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ porn (ဒီဗီဒီ, မဂ္ဂဇင်းများ) ကိုဖွိုဖကျြ
အင်တာနက် porn blocker ကို install လုပ်ပါ။ သင်မမှတ်မိသောစကားဝှက်ကိုထည့်ပါ။ ၎င်းကိုရေးချပြီးပြန်လည်ရယူရန်ခက်ခဲသောနေရာတွင်ထားပါ။
ကွန်ပျူတာအချိန်ကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဖြစ်ပေါ်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုကြုံတွေ့ရပါကသင့်ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ထားပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏“ သွားနှင့်” အပြာအစားထိုးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ အပြုသဘောဆောင်။ ကျန်းမာသောအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ စစ်တုရင်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ရပ်နိုင်သကဲ့သို့ masturbating ကိုရပ်တန့်။
သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေရမည်ဆိုပါက porn မပါဘဲပြုလုပ်ပါ။
အစဉ်မပြတ်သင်၏အတှေ့အကွုံမြားထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်သင်၏ဂျာနယ်ကို update ။
သင်သည်နောက်တဖန် porn ကိုအသုံးပြုပါကအရှုံးမပေးပါနှင့်။
ဒါဟာဝေးညစ်ညမ်းနေရန်နှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးတတ်နိုင်သမျှများအတွက် masturbating ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါနဲ့ကြာဘာပဲလုပ်ပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညစ်ညမ်းမှုနှင့်“ စမ်းသပ်” ရန်တွန်းအားကိုတွန်းလှန်ပါ။ ဒါကနောက်ကျောကိုသင်သို့ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
မလုပ်ပါနှင့်!!! သင့် ဦး နှောက်ကိုနားထောင်ပါ သငျသညျ reboot လုပ်တော့မယ်, ထို့နောက်လုပ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအားလုံးလျစ်လျူရှု။
၂ လလောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်သင်လိုချင်သမျှကို“ ဒါတကယ်အလုပ်လုပ်သလား” လို့သင်စဉ်းစားနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ်“ ငါဆက်လုပ်သင့်သလား”
နောက်ဆုံး rebooting အကြံဥာဏ်
တဦးတည်းငယ်ရွယ်ကောင်လေးသည်သူ၏ reboot သို့သုံးပတ်ကြာ said:
ထူးဆန်းပါတယ် ဒီစွဲလမ်းမှုကိုရပ်တန့်စေဖို့သည်အခြားတံခါးများဖွင့်ပြီးဘဝ၏အခြားရှုထောင့်များတွင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေးဘူး။ ငါအမြဲတမ်းမျှော်လင့်ထားတာကငါ့ရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ပဲဖြစ်မယ်၊
ဤအတွေ့အကြုံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ရန်ဥယျာဉ်မှူးကိုချဉ်းကပ်ပါမည်။ ဒါဟာအနည်းဆုံးပြောအလွန်မျက်စိ - ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာအမြင်အာရုံအသစ်တွေကိုဖန်တီးနေသလိုမျိုး၊ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အခြားရှုထောင့်တွေကိုအပြောင်းအလဲတွေမလုပ်ခင်မှာပဲကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အခြားရှုထောင့်တွေကိုအပြောင်းအလဲတွေလုပ်နေသလိုခံစားရတယ်၊
ပြင်ပ Rebooting ဘလော့ဂ်များ၊ ဖိုရမ်များနှင့် Threads